सरकारले किसानलाई बेरोजगार र घरबारबिहीन बनाउँदै छ : वामदेव गौतम - DURBAR TIMES
HomeAgricultureसरकारले किसानलाई बेरोजगार र घरबारबिहीन बनाउँदै छ : वामदेव गौतम
सरकारले किसानलाई बेरोजगार र घरबारबिहीन बनाउँदै छ : वामदेव गौतम
नेकपा एमालेका नेता एवम् अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारले किसान विरोधी कदम चालेर कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने काम गरेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन् ।
धान दिवसको अवसरमा एक विज्ञप्तिमार्फत् शुभकामना प्रदान गर्दै नेता गौतमले कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार बाधक भएको बताए ।
सरकारले सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा प्रवेश गराउनका लागि वैदेशिक लगानी व्यवस्था ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर अनुकूल गरेर किसानलाई बेरोजगार र घरबारबिहीन बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
‘हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका हौं, नेपालको कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पूवेश गर्न दिइनुहुँदैन । यदि त्यसो गरियो भने नेपाली किसान जनताका हक, अधिकार र समृद्धिका सम्पूर्ण योजना भताभुङ्ग हुन्छन्,’ उनले भनेका छन् ।
नेता गौतमले आफूहरूले धेरै वर्षअघिदेखि भूमि बैंकको बिरोध गर्दै आएको बताए । ‘भूमि बैंक भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूले अगाडि सारेका एजेण्डा हुन् । इण्डोनेशिया र फिलिपिन्समा पूर्णतः असफल भइसकेको यो कार्यक्रम अहिले हाम्रो देशमा ल्याउने काम वर्तमान सरकारबाट भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी करार खेती भित्र्याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको भन्दै यो नेपालको संविधान-२०७२मा उल्लेखित खास सम्प्रभुताको विरुद्ध रहेको समेत बताए । ‘करार खेती भनेको एक किसिमको कर्पोरेट मोडकलको कृषि कार्य हो, जहाँ व्यापारिक म्पनी हावी हुन्छन् र कृषक समुदाय पूर्णतः विस्थापित हुन्छन् । भारतदेखि युरोपेली मुलुकका किसानहरू यस्तो खेती प्रणालीबाट प्रताणित छन् । कतिपय मुलुकमा किसान यस्तो खेती प्रणालीविरुद्ध छन् ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Previous articleरोपाइँ सकिएका क्षेत्रको गणना स्याटेलाइटबाट हुँदै
Next articleनिर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता : नेपाल
आज रातीबाट डिभी खुल्दै,आवेदन दिनका लागि के के चाहिन्छ ?
आइपिओ भनेकाे के हाे ? कसरी लगानी गर्ने ? किन लगानी गर्ने ?